Buy Car Back Light (19,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : 271ရက်​
ကြည့်သူအရေအတွက်: 223 (+ 1 )
ကားနဲ. ဆိုင်ကယ် နောက်မီး
နောက်မီး လှလှ လေးထွန်းချင်သူများအတွက် ကားမီးလေးကို ဝယ်နိုင်ပါပြီ။
ဆိုင်ကယ်၊ ကားနဲ. ချိတ်ရန် အနီ၊အမဲ ကြိုးတစ်ကြိုး ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိကားအားအဝေးမှထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရမယ့်လေဆာမီးတန်း အနေနဲ.လည်း အသုံးပြုလို. ရပါတယ်။
ဈေးနှုန်း – ၁၉၀၀၀ ကျပ်
အမည်: Car Back Light